Halıcıoğlu Metrobus Hit Metrobus, 3 Dhaawac ah | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulHalıcıoğlu Metrobüs Hit Metrobus, 3 Dhaawacmay
06 / 10 / 2019 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metrobus, TURKEY
baroioglunda metrobuse metrobuse carpti dhaawacmay
Metrobus dhanka jihada Mecidiyeköy, Halıcıoğlu metrobus horteeda dadka 3 waa ay ku dhaawacmeen natiijada.
Shilka ayaa ka dhacay Beyoğlu Halıcıoğlu metrobus stop. Sida ku xusan macluumaadka la helay xilliyada safka 9.45 ee magaalada Istanbul, jihada Avcrolar metrobus, Hal ,cıoğlu bas joogsiga hortiisa ee metrobus ayaa ka dhashay natiijada.
Intii ay socotay munaasabadu, muwaadiniinta ku nool magaalada Metrobüste waxaa ka dhacay argagax weyn kadib shilkii dhacay, dadka 3 ayaa ku dhaawacmay shilka. Halkii shilka waxaa loo gudbiyay kooxda caafimaadka iyo kooxda booliiska. Dhaawacyada waxaa loo qaaday ambalaas isbitaalka. Jid-gooyooyinkii shilka galay ayaa loo qaaday meesha aaminka ah ee ay wax kululaadaan. Duullimaadyadii Metrobus ayaa caadi ku soo noqday.
Shilka Metrobus ee Halicioge, 2 ayaa ku dhaawacmay
Halıcıoğlu joojinta metrobus waa cusboonaysiin
Metrobus ayaa ku dhaadhiciyay dadka lugta leh: 7 dhaawacmay
Metrobus: 1 ayaa dhintay, 3 dhaawacmay (Video)
Boorphorus Bridge baabuur metrobus ayaa ku dhaawacmay 6
Derby Attack on Metrobus
Halıcıoğlu joojinta metrobus
Shil Gaari oo ka dhacay Magaalada Halıcıoğlu
Isku xirka metrooga Metrobus